Ogaden News Agency (ONA) – Siminaar ay wadajir u soo qaban-qaabiyeen IHASA iyo AFRICA UNITE oo lagu qabtay dalka Koonfur Afrika
Posted by ONA Admin	/ October 23, 2011
Waxaa shalayto oo ay taariikhdu aheyd 21-010-2011 lagu qabtay hawlka dhaqanka iyo fanka ee magaciisa ladhoho Little Theatre oo ku yaala badh-tamaha magaalada Central Port Elisabeth siminaar looga hadlayay is-dhexgalka bulshooyinka kala badalan ee ku nool gobolka Nelson Mandela Bay.
Siminaarkan ooy soo qabanqaabiyeen laba hayadood oo kala ah IHASA iyo AFRICA UNITE oo ah urur bulsheedyo u dhaq-dhaqaaqa horumarinta arimaha bulshada, ayaa lagu martiqaaday urururo bulsho oo ay ka midtahay OGADEN COMMUNITY IN SOUTH AFRICA (JOKA) Iyo Somali community SASA
Jaaliyada ogadeniya ee JOKA ayaa ka heshay marti qaad haayada AFRICA UNITE oo ay horay u wada lahaayeen wada shaqeen waxana ka qeeb galay shirkaas wafti ka socda jaaliyadda oo ka koobnaa 4 xubnood.
Inkasta oo waxyaaba badan looga hadlay siminaarka hadana dulucdu waxay ahayd isfahansiinta bulshooyin ku kala duwan dhaqanka, dhaqaalaha , luuqada iyo diintaba.
Dadka sida wayn uga hadlay work shops- ka waxa kamid ahaa kuxigeenka duqa magaalada port Elizabeth oo ku nuux-nuuxsaday sida bulshadu isugu baahantahay isdhexgalkuna u yahay furaha horumarka bulshooyinka. Wuxuu si gaar ah u sooqadatay in joogitaanka Somalidu yahay mid faa iido dhaqaale u keenaya dalka islamarkaa ay tahay in la abuuro xidhiidh-bulsho oo sii adkeeya isdhexgalka iyo isfahanka dadka kuwada nool halmeel. waxay gabadhaasi, kuxigeenka duqa magaalada ihi si dhiiran ugu kaftantay in loobaahanyahay in Somalidu guursato dumarka deegaanka si ay u dhalaan bay tidhi ciyaal qurux badan islamarkaana noola wadaagaan magacaanta Sipho iyo Bongaani hadalkas oo sacab iyo qosolba kadhexkiciyay shirka.
Waa markii koobaad ee aqoon iswaydaarsi noocan oo kale ah la qabto waxayna umuuqataa inay tahay mid lagu dajinayo siyaasada ku saleesan arimaha kasoo kordhay gobolka Gauteng oo shisheeye nacayb kusalaysan.
Dadka hadlayay waxay aad ugu cel-celiyeen sida loogu baahany in somalidu ka qaybqaadato arimaha kobcinaya is-dhexgalka iyo is aaminaada bulshooyinka wadanool.
Nin horay u ahaanjiray danbibaadhe iyo sirdoonka qaranka oo hadda hawlgab ah ayaa sitoosa carabka ugu dhuftay inay jiraan dad laga soo dhoofiyay wadamo kale oo siyaasadoodu xuntahay si ay u soo dilaan dad wadankan nabadgalyo u soo doontay arintaas oo dadku aad ugu dhag taagay ayuu ku sheegay inay tahay arin uuna rabin inuu halkan ku falanqeeyo isagoo sheegay in baadhis lagu samayn doono arintaas.
Samenaarkan oo furmay 8.30 subaxnimo ayaaa soo xidhmay 4tii galbanimo wuxuuna ku soo xidhmay is af garad iyo in lasii wado semanaarada iyo shirarka noocan ah lana xoojiyo siyaasada community si ay isu bartaaan .